I-Family Cottage w eyakhe i-sandbeach, i-sauna, i-ski, ukuloba
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKasper
Wamkelekile 'eStrandlyckan', indlu yethu entle, esiyirentayo xa singayisebenzisi ngokwethu indlu. Indlu ibekwe yodwa ehlathini kwaye ilungile ngakwihlathi layo lechibi elinejethi kunye nolwandle olunesanti
Yi-1.5 km kuphela ukuya kwidolophu yase-Åseda enokuthenga okulungileyo kunye nezithuthi zikawonke-wonke
Le ndlu isandula ukulungiswa kwaye inezixhobo zangoku ezifanelekileyo. I-suana isanda kongezwa phantsi kwe-terrace
Iindawo ekuchithelwa kuzo iSki:
Ukutyibiliza kwilizwe elinqumlayo elinemizila elungisiweyo yokutyibiliza ekhephini kunye neendlela ezilula: 2 km (Åseda)
Indawo yeAlpine: 25 KM (Ketilsås okanye iDackestupet)
Indlu ibekwe yodwa ehlathini njengekuphela kwendlu kaGassjön, enebhulorho yayo yokuhlambela kunye nebhulorho yesikhephe kunye nonxweme lwabucala olunesanti enomzantsi wesanti kwindawo yokuhlambela.
ENTSHA NGO-2021: Isakhiwo esitsha se-sauna phantsi kwethafa elijonge echibini.
Ikhaya linekhitshi elitsha kunye negumbi lokuhlambela, kunye nomatshini wokuhlamba, impompo yomoya oshushu kunye nesitovu seenkuni. Kukho igumbi lokuhlala elikhulu elinesilingi eziphezulu, amagumbi okulala ama-2 amancinci aneebhedi ezi-2 kunye ne-3 ngokulandelelanayo. Ukongeza, ikhabhinethi yeendwendwe eneendawo zokulala ezi-2.
Echibini kukho amathuba amahle okuloba i-pike kunye ne-perch.
Ukufikelela kwisikhephe sokubhexa kunye neebhayisekile ezi-5
Ukukwazi ukusebenzisa iibhodi zokubheqa kunye nephakheji ye-angler ngokuqeshwa
Nangona indlu izimele yodwa, yi-1.5 km kuphela ukuya kwidolophu ekufutshane, i-Åseda, apho kukho amathuba amahle okuthenga ukutya, ivenkile yehardware, ibhanki, ipizzaria, indawo yokutyela, itanki, njl.
Ezinye izixhobo kule ndawo:
Idama lokuqubha e-Åseda
Ubukumkani beglasi - iiglasi ezahlukeneyo zeglasi
Uloliwe waseNostalgia - Umzila omxinwa ubaleka usuka e-Åseda udlula endlwini
Umzila okhanyayo wokuqhuba kunye neendlela ezilungiselelwe ukuwela ilizwe ebusika
Iindawo ezahlukeneyo zokutyela zelizwe lasekhaya kufutshane
Umbuki zindwendwe ngu- Kasper
Sihlala eDenmark kwaye asiyi kufumaneka ngokwethu, kodwa kuya kubakho ukufikelela ngekhabhathi ephambili. Qaphela ukuba kukho inzwa ye-alarm enekhamera yemifanekiso emileyo kwisilingi kwigumbi lokuhlala.
Kunokwenzeka ukuba u-odole inkonzo yokucoca eyenziwa yinkampani yokucoca yendawo. Ixabisa i-1100 DKK / 1500 SEK / 150 Euro. Ulwazi luthunyelwa emva kokubhukisha.
Sihlala eDenmark kwaye asiyi kufumaneka ngokwethu, kodwa kuya kubakho ukufikelela ngekhabhathi ephambili. Qaphela ukuba kukho inzwa ye-alarm enekhamera yemifanekiso emileyo kwisili…